Godina Wallaggaa Aanaa Eebantuu Keessatti Ayyaana Guyyaa WBO Irratti Walitti Bu’iinsa Barattootaa fi Humna Hidhaataa Diinaa Jidduutti Ka’een Barattooti Oromoo Injifatan. – QEERROO
Qeerroo January 7, 2013 Oduu/News
Godina Wallaggaa Aanaa Eebantuu Keessatti Ayyaana Guyyaa WBO Irratti Walitti Bu’iinsa Barattootaa fi Humna Hidhaataa Diinaa Jidduutti Ka’een Barattooti Oromoo Injifatan.
Amajjii 07,2012 Naqamte
Godina Wallagga bahaa aanaa Eebantuu magaalaa Hindeetti Goototni barattoota Oromoo, Barsiisotni, Hojjetootni Waajjira Qonnaa aanaa Eebantuu bakka tokkotti walitti dhufuun Amajjii 1 guyyaa WBO Uffata aadaa Oromoon faayamanii sirna miidhagaa fi seena qabeessa ta`een kabajatanii oolan.
Guyyaa kabajaa Ayyaana kanaa ilaalchisee sabboototni Oromoo bara haaraa kanatti dhimma biyya isaanii fi saba isaniirratti akka wal bira dhaabbatanii fi wal gargaaran, haalaa fi bifa kamiinuu taanaan waan dandeenyuun QBO bira dhaabbachuun ga`ee fi qooda dirqama lammummaa keenyaa ba`uu fi raawwachuu qabna jechuun marii walii galaa geggeessan keessatti waadaa waliif galuuniiru.
Haaluma walitti dhufeenyaa fi bakka tokkotti walitti qabamuu sabboonota Oromoo kanarraa sodaa fi birruu guddaa kan qabdu OPDO n humna waraanaa meeshaa guutuu hidhate itti bobbaaftullee sabboototni barattootaa fi barsiisotni mana barumsaa hindee itti roorisa diinaaf utuu hin birratiinii fi hin millatiin sirna kabajaa isaanii haala miidhagaan eegalanii sirnaan xumuuratanii erga namnuu adda adda deemeen duubatti ergamaan Wayyaanee diinummaa fi hammeenya gara malee kan ummata Oromoorratti raawwataa turee fi ammallee ummata hidhaa,reebisisaa fi saamisaa kan jiru ajajaan humna poolisaa aanaa Eebantuu Mokonnoon Raggaasaa Humna Poolisaa baayyinaan Ummatatti bobbaasee ture. Akka kanaan Poolisootni barattoota guyyaa WBO kabajatan qabuuf yeroo bobba’anitti ummanni Oromoo naannichaa fi barattooti wal ta’uun poolisoota of irraa deebisuuf dirqaman. Oromoon ummata nagaa fi qee’ee fi maatii isaa keessatti kabajaa ayyaana fedhe kabajachuuf mirga qaba nurraa deemaa jennaan poolisoonni yeroo diddaa argisiisanii hudhannoon ummataatti bobban gootonni barattooti Oromoo diina meeshaan deemu dhagaan loluun injifatanii of duuba deebisanii jiru.
Haala kanaan ergamtooti diinaa qawwee diinaa baatan sadii93) gara malee miidhamuun Hosptala Giddaa Ayyaanaa fi Laqamteetti akka geefaman gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.
Baratooti Oromoo haala kana keessatti qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran waan jiraniif diddaan ummataa itti fufee barattoota Oromoo hamma gadi dhiifaman duubatti hin deebinu kan jedhuun hanga ammaa FDG itti fufee jira.
Ummatni Oromoo aanaa Eebantuu iriira mormii ba`e keessatti ,
1. Ajajaa poolisaa jedhamee kan asi jiru Mokonnon Raggaasaa umata keenya akka malee miidhaa jira.mana hidhaatti umma guuree iraarsaa jira. hatatamaan akka inni asii ka`u jechuun gaafataniiru.
2. Miidhaa fi reebicha, saamichaa fi hidhaa sirnaa fi heera malee ummata Oromoo akkasumatti sababa ilaalcha ABO qabdaa fi caasaa ABO keessa jirta ykn ni beekta wkf jechuun nama yakkanii waan qabatamaa fi ragaa hin qabne sobaan nama hidhuun akka nurraa dhaabbatuu fi gochaa akkasii kana irraa poolisootni aanaa kana keessa jiran hundi gara malee ummata keenya miidhaa jiru. waan kana irraa akka dhabbatani jechuun gaafataniiru. Gara Godina wallagga bahattis iyyataniiru.
Xumuura irratti yaada dhaammatan,
1. Hidhaa fi reebicha fedhe kamiyyuu nurratti raawatamu, duuti fedhe kamiyyuu QBO irra duubatti nu hin deebisu!
2. Hanga Bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomtutti mirga keenya ni falamna!
3. Dabaa fi shira mootummaan gabroofataa nurratti hojjetu fi hojjetaa jiru kamiyyuu tole jennee hin fudhannu! Duras ni dhaabbanna!
4. Barataan hidhame kun Obboleessa keenya, ilma keenya! akka inni mana hidhaatii hatattamaan ba`us ni gaafatan. Hanga inni ba`uttis mormii qabannus itti fufna jechuun bariisotnii fi barattootni ejjennoo isaanii ibsaniiru.
Bariisota, Baratootaa fi Sabboontota Oromoo aanaa Eebantuu irraa
Xiiqii	 on January 8, 2013 at 12:01 pm
Maal jijjiirraa kitilayyoo diinaa gaafatu! Jijjiirames garuma uummata Oromoo biraatti ramadama mitii? Kanaaf, wanti akkasii dhugumaan uummati qindaa’ee fincilee jira taanaan ajajaa Humna Poolisaa kana gorsuudha. Gorsa yoo dide, isuma mataa isaa addunyaa kana irraa jijjiiruudha malee bakka bira akka adeemu gaafachuun furmaata miti!!!
Wallee Filatamaa Bara 2012 , KA’I QEERROO!!